Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » UKhenketho lwaseGrike luqhubela phambili ekuBuyiseni ngokupheleleyo ngo-2022
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zaseGrisi zokuPhula • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Novemba 3, 2021
Umphathiswa wezoKhenketho waseGrisi, owayesakuba nguMphathiswa wezeMpilo eGrisi ngexesha lobhubhani, uMnu. Vasilis Kikilias, wamkele abathunywa kwiMarike yokuHamba yeHlabathi eLondon ngoMvulo we-1 kaNovemba kwaye wachaza ukuba imigaqo-nkqubo yobhubhane iluxhase njani ukhuphiswano lwelizwe ngo-2021 kwaye njani. ilizwe lilindele ukhenketho, olubonelela nge-25% yoqoqosho lwalo, luya kubuyela kwimeko entle ngokupheleleyo ngowama-2022.
I-2021 kwi-65% yerekhodi ye-2019 unyaka.
Ukubuyiselwa ngokupheleleyo kokhenketho kulindeleke ngo-2022.
Ukwandisa ixesha lokhenketho kuyaqhuba kwaye kuya kunceda ekuchacheni.
Umnumzana Kikilias ukwachaze ukuzinikela kwakhe kwiinkqubo zokhenketho ezizinzileyo kwaye unike iinkcukacha ngenkqubela encomekayo eyenziwe lilizwe ekwandisweni kwexesha lonyaka.
IGrisi iphinde yachaza isicwangciso sayo seminyaka eyi-10 (uCwangciso lweSicwangciso seSizwe soPhuhliso lwezoKhenketho luka-2030), olwasungulwa phakathi kwexesha elinzima kakhulu, ngokwemingeni kunye nokhuphiswano. Amanqaku aphambili abandakanya uphuhliso lwemveliso kunye nokukhuthazwa, ukufikeleleka kunye noqhagamshelwano, iziseko ezingundoqo zohlaza/ukhenketho oluzinzileyo, ulawulo lwamava, imfundo noqeqesho lokhenketho, indlela karhulumente wonke, isikhokelo solawulo kunye nolawulo lwentlekele.”
Ukukhula emva kobhubhane
Iinjongo zaseGrisi kukhenketho ngo-2021 yayikukufikelela kwi-50% yamanani erekhodi ka-2019. Oku kujoliswe kuko kuye kwafikelelwa kwaze kwagqithwa ngama-65%, ngenxa yentsebenzo engumzekelo kweli xesha lokwindla.
Umnumzana Kikilias uthe: "Icandelo lezoKhenketho lwaseGrisi libonakalise ukomelela okumangalisayo."
UMphathiswa ukwathe: “Amanani abonisa ukuba iirisithi zokuhamba ziphindaphindeka kabini ngonyaka. Zonke iimpawu zomgangatho ezifana nenkcitho ephakathi kunye nobude bokuhlala nazo ziphuculwe kakhulu. ”
“Izele ukubuyisela kukhenketho lwamaGrike ilindeleke ngo-2022 (okwangoku akukho kwahluka kutsha kuvelayo). Oku akusekelwe kwiminqweno enqwenelekayo kodwa kwidatha enzima esiyifumanayo kwinani leenqwelomoya ezintsha iindlela ezintsha kunye nomdla obonakaliswe eGrisi ukusuka kwishishini.
“Ukuvuselelwa kokhenketho kuya kuxhasa ukuvuseleleka koqoqosho ngokubanzi. Nakulo nyaka uqikelelo lwethu lokuqala lokukhula kwe-3.6% luhlaziywe lwaya kutsho kwi-5.9% ngenxa yokusebenza ngokugqithisileyo kwicandelo lezokhenketho.
IsiCwangciso seSizwe soBuyiselo kunye noBuyiselo seSizwe saseGrisi sinebhajethi ye-euro yezigidi ezingama-320 yophuhliso lokhenketho, iziseko ezingundoqo, ukubuyisela izakhono kunye nokuphucula imfundo yezokhenketho kunye nedijithali.
Ukhenketho lumalunga ne-25% yoQoqosho lwaseGrike. Kukho utyalo-mali olubonakalayo kuphuhliso olutsha okanye kuphuculo lwabantu abadala.
Iinkcukacha manani eziphambili
Ukusukela ngoJanuwari-Agasti 2021: Intsalela ye-5.971 yeebhiliyoni zeeyuro (ngoJanuwari-Agasti 2020: Intsalela ye-2.185 yeebhiliyoni zeeyuro)
NgoJanuwari-Agasti 2021: I-6.582 yeebhiliyoni zee-euro (ngoJanuwari-Agasti 2020: i-2.793 yeebhiliyoni zee-euro, ukunyuka kwe-135.7%)
Iindlela zokuhamba ezingenayo
EyeThupha 2021: Ukunyuka nge-125.5%. NgoJanuwari-Agasti 2021: Ukunyusa i-79.2%
Iirisithi zokuhamba / Ilizwe
Abahlali be-EU-27 amazwe: i-4.465 yezigidigidi zee-euro, ukwanda kwe-146.2%
Abahlali bamazwe angengawo-EU-27: € 1.971 billion, ukwanda kwe-102.0%
EJamani: I-1.264 yezigidigidi zee-euro, ukwanda kwe-114.7%
IFransi: i-731 yezigidi ze-euro, ukwanda kwe-207.7%
EUnited Kingdom: I-EUR 787 yezigidi, ukwanda kwe-75.2%
I-US: i-340 yezigidi ze-euro, ukwanda kwe-371.5%
IRashiya: i-58 yezigidi ze-euro, ukwanda kwe-414.1%
UMphathiswa uyaqhubeka: “Ngokungathandabuzekiyo lo bhubhani uchaphazele onke amacandelo obomi bezoqoqosho kuwo onke amazwe. EGrisi echatshazelwa kakhulu yingeniso yokhenketho njengoko i-euro e-1 kwezi-4 iza ngokuthe ngqo okanye ngokungathanga ngqo kwicandelo lokhenketho. Ibingumceli mngeni omkhulu ukujongana nemiba yokukhusela impilo kunye nokhuseleko lwabantu bethu kunye neendwendwe kunye nokuzama ukugcina uqoqosho luvulekile. Ngokubhekiselele koku, isikhundla sam sangaphambili njengoMphathiswa wezeMpilo kule minyaka mibini idlulileyo sidale iqhina elingazange libonwe ngaphambili phakathi koKhenketho kunye noMphathiswa wezeMpilo.
"Amanyathelo athatyathwe ngu-PM uKyriakos Mitsotakis enze indlela efanayo yokuqaphela abantu abagonyiweyo abavela kumazwe e-EU kwaye wabavumela ukuba bahambe, ngeli lixa bephumeza imigaqo engqongqo kwicandelo lokwamkela iindwendwe eyakha inqanaba lokuthembela elingenakuthelekiswa nanto eGrisi kwaye yanceda ekomeleleni kwelizwe. icandelo lezokhenketho.
“Intsebenziswano esondeleyo yecandelo labucala nelikarhulumente iye yasekwa, nto leyo ekhokelele ekuvulweni kwakhona kweshishini lokuhamba laseGrisi, ngokhuseleko, ubugcisa kunye nemigaqo engqongqo eyathi yaphunyezwa ngendlela engumzekelo. Le ntsebenziswano ibe nefuthe elihle kwi-brand equity yaseGrisi.
“Zonke iinkcukacha zethutyana zibonisa ukuba silwenze ngokungaphaya uqikelelo lwethu lokuqala. Emva kokuthandabuza ukuqala ngoMeyi kaJuni ukuya kuthi ga ngoku ngo-Okthobha kwaye kwezinye iindawo uNovemba ubonisa ukuba sikwazile ukufikelela ngaphaya kwenjongo yantlandlolo yama-50% ka-2019. Umzekelo unokuba yinkcitho eyi-avareji yohambo ngalunye eye yasondela kwi-700 € ukusuka (2020: € 583, 2019: € ​​535) kunye nomndilili wobude bokuhlala.
“Ngenxa yokuba iGrisi yabhengeza kwangethuba ukuba iza kuvuleleka njani kukhenketho lwamazwe aphesheya, abaqhubi, abathengi kunye neenqwelomoya banikwe ithemba lokucwangcisa.
Umnumzana Kikilias uthe: “Ukolula isizini lunjongo ekusafuneka yenziwe. Eli xesha lasekwindla libonise ukuba kwiindawo ezininzi 'zasehlotyeni' singakwazi ukwamkela iindwendwe kude kube nguNovemba kwaye silungiselela ukwamkela iindwendwe kwakhona kwasekuqaleni kuka-Matshi. IGrisi ineendawo zonyaka wonke ezibandakanya izixeko ezinjengeAthene kunye neThessaloniki ezinokubhenela kuwo onke amacandelo eendwendwe.
"Isicwangciso sokusebenza sika-2022 sibandakanya ukuphuhliswa kwezicwangciso-qhinga zokuthengisa ixesha elide kunye neendlela ezikhethekileyo zokhenketho, ukuseka iGrisi njengendawo yokutyelela unyaka wonke. Eyona njongo yesicwangciso-qhinga seSicwangciso seNtengiso yeSicwangciso sika-2021 soKhenketho lwaseGrisi kukubuyisela ushishino lokhenketho eGrisi kuthathelwa ingqalelo iimeko zangoku, iimeko zelizwe kunye nezehlabathi jikelele. Wonke umntu obandakanyekayo kwishishini lokuhamba, kuthi, isiqwenga esibalulekileyo; yiyo loo nto sizama ukuqinisa zonke iinzame, ngeGreek National Tourism Organisation, ngentsebenziswano ekujoliswe kuyo kakuhle, ukuthengisa ngokubambisana kunye nemisebenzi yokwazisa.
IGrisi ijolise ekubeni ngumzekelo kukhenketho oluzinzileyo
Umnumzana Kikilias uthe: “Sifuna ukwenza iGrisi ibe ngumzekelo wokhenketho oluzinzileyo. IGrisi sele ibhalisele amanyathelo anje IMeditera: imodeli yolwandle ngo-2030 ejolise ekukhuseleni iintlobo-ntlobo zezityalo nezilwanyana eziphilayo kunye nokunciphisa ukuloba nongcoliseko kunye nokwenza iziqithi zingabi nakhabhoni neplastiki. Kwingqungquthela yokutshintsha kwemozulu ye-COP26 eGlasgow, uNdunankulu waseGrike ubonise iziphumo zokuqala zophando malunga nendlela iGrisi inokuguqula ngayo izinto zayo ezimbini ezinamandla kakhulu - iSantorini kunye neMykonos - kwiindawo zeplastiki ezikhululekile kwaye zibe yiMizekelo yokuZinza ngendlela epheleleyo. Okwangoku, kukho izicwangciso zesiqithi saseChalki ukuba sinikwe amandla kuphela ngemithombo yamandla avuselelekayo.
Uphuhliso oluluhlaza kunye noluhlaza okwesibhakabhaka
Umnumzana Kikilias uthe: “Sinqwenela ukwazisa kwabo siza kuba ngabakhenkethi bethu iindawo ezininzi zelizwe ebezingaziwa ngoku kodwa eziziindawo ezifanelekileyo zokuva ububele bokwenyani belizwe lethu. Oku kuquka iziqithi ezikwanti kunye nemimandla esezintabeni.”
UMphathiswa wezoKhenketho ujolise ekuxhaseni ukhenketho lwaseGrike phezu kweentsika ezimbini, ezizezi, uphuhliso oluluhlaza noluhlaza.
Uphuhliso lokusiNgqongileyo lunokusebenza njengesantya esikhokelela kuphuhliso oluzinzileyo nolubandakanyayo lwecandelo lezokhenketho, ngokubumba isindululo sexabiso eliphezulu kwimimandla enoshishino lokhenketho olungaphuhliswanga, ukuvuselela utyalo-mali nokuphucula iimbono zengqesho kwimimandla apho iziphumo zobhubhani ziye zavakala ngokubanzi.
IBlue Development ijolise ekuphuculeni ukufikeleleka kwiindawo eziselunxwemeni kunye nezibonelelo zamazibuko ukuze kuphuculwe ngakumbi umgangatho wemveliso yesizwe yokhenketho lwaselwandle.